Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland oo Xafiiskiisa ku qaabilay Wafti ka socday dalalka Midowga Yurub – WARSOOR
HARGEYSA – (WARSOOR) – Guddoomiyaha Maxkamadda Sare aha Guddoomiyaha Guddida Cadaaladda Jamhuuriyadda Somaliland Aadam Xaaji Cali Axmed ayaa khamiista maanta xafiiskiisa ku qaabilay waft I balaadhan oo ka socday dalalka Midowga Yurub.
Kulanka ay yeesheen guddoomiyaha iyo waftiga ka socday dalalka ay Somaliland wadaagaan xidhiidhka iyo iskaashiga soo jireenka ah, ayaa daaranaa is-xog-waraysi guud oo la xidhiidha xaalada dalka, waxanay ka wada-hadleen arrimo dhawr ah oo ay ka mid yihiin go’aankii ay dhawaan Maxkamadda Dastuuriga ahi, ka soo saartay dacwadihii loo soo gudbiyay iyo doorkii muhiimka ahaa ee ay ka qaadatay dajinta xaaladdii taagnayd iyada oo ay soo dhaweeyeen dhammaan dhinacyadii ay khusaysay. Guddoomiyaha iyo waftiga ayaa sidoo kale isla soo qaaday doorashooyinka la filayo in ay dalka ka qabsoomaan, waxaanay ku bogaadiyeen garsoorka dalka kaalinta wanaagsan ee uu kaga jiro horumarka iyo geedi-socodka dawladnimada Jamhuuriyadda Somaliland waxaanay xuseen in ay xoojinayaan wada-shaqaynta ay la leeyihiin Somaliland. Geesta kale guddoomiyaha ayaa waftiga uga waramay dedaalada lagu fidinayo adeega garsoorka, waxaanu tibaaxay in deegaano badan laga furay Maxkamaddo halka la xoojiyay Maxkamadaha guurguura oo laf-dhabar u ah in ay bulshada Somaliland si siman u helaan adeega garsoorka ee ay xaqa u leeyihiin.
Ugu danbayn guddoomiyaha Maxkamadda Sare ayaa uga mahadceliyay waftiga booqashada ay waddanka ku yimaadeen iyo iskaashiga wanaagsan ee ay la leeyihiin Somaliland gaar ahaan hay’adda garsoorka dalka, waxaanu ku booriyay in ay sii wadaan wada-shaqaynta ka dhaxaysa labada dhinac.